Abaar Adag oo ka Jirta Degaanka Somalida Ogadeeniya – Rasaasa News
Dec 29, 2010 Abaar Adag oo ka Jirta Degaanka Somalida Ogadeeniya
Jijiga -[Dec 29, 2010] – Abaar aad u xun oo ka jirta degaanka Somalida Ogadeeniya, taas oo waxyeelo xun ku haysa dadka iyo duunyadaba, oo laga soo sheegayo dhamaan gabalada dalka.
Roobabkii Dayrta ee la sugayey in ay ka da,aan degaanka Somalida Ogadeeniya ayaan sanakan gabi ahaanba ka di,in degaanka Somalida. Afarta xili ee sanadka ayey labo ka mid, ka degaan Robab dhulka Somalida Ogadeeniya. Dayrta oo ah xiliga ay Roobabaku ka da,aan dalka ayaan sanadkan gabi,aanba ka di,in dhulka Somalida Ogadeeniya, waxaana raacay xiligii Roob la,aanta oo ah Jilaal oo hada lagu jiro.
Lix bilood oo Roob la,aan ah ayaa waxay keentay in biyaha iyo baadkuba ay gabaabsi ku noqdaan degaanka Somalida Ogadeeniya, waana sababata keentay in ay abaar xun hayso degaanka Somalida Ogadeeniya. Gabalada qaar ayaa laga soo sheegayaa in ay xooluhu aad u tabar daran yihiin, dadkana ay macaluul adagi ka muuqato. Waxaan la sugaynin Roob ka da,a degaanka Somalida bilaha fooda inagu soo haya, taas oo keeni karta dhibaato ku timaada dad iyo duunyaba.
Dawlada Degaanka Somalida iyo dawlada dhexee ayaan wali wax warbixin ah ka soo saarin abaarta laga dayrinayo ee ka jirta degaanka Somalida. Marar hore oo ay abaaro ka dhaceen degaanka degaanka Somalida ayey ka war heshay dawladu xili ay dhibaato xun gaadhay dad iyo duunyaba, xiligaas ay dawlada ka soo gaadheen eedaymo caalami ah sanadkii 2000.
Madaama ay Qaramada dalka Itobiya mid waliba masuul ka tahay degaankeed, ayeyna dawlada dhexe aad xil isaga saarin, la socodka arimaha u gaarka ah Kilalada, waxayna ka sugtaa warbixintooda dawladaha ka jira Degaanadu in ay marka hore qaylo ka keenaan dhibaatooyinka.
Gabalada ugu daran ee ay abaartu ka jirto ayaa ah gabalada Shabeele, Qoraxeey iyo Doollo, Nogob, Afdheer iyo Liban, kuwaas oo aan wali yeelanin wadooyin sahli kara in uu raashin ganacsi ah dhakhso u tago gabaladaas.